हेग गएर हिरो बन्ने प्रचण्डको दृष्टिदोष !
नेपालमा भएको सशस्त्र द्वन्द्वकालीन मुद्दाको निरूपणको बहस चलिरहेको समयमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सोमवार अनासायै हेग (नेदरल्याण्डमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत)को प्रसंग कोट्याएर राजनीतिलाई तरंगित बनाइदिए ।
नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले नेतृत्व गरेको नेकपाका केही कार्यकर्तालाई आफ्नै निवास खुमलटारबाट पार्टी प्रवेश गराउने क्रममा प्रचण्डले आफूलाई हेग लगिए झन हिरो हुन्छु भन्ने अभिव्यक्ति दिए । ‘हेग लगिए पनि मलाई केही फरक पर्नेवाला छैन । हेग लगे भने त म झन विश्वकै हिरो भएर निस्कन्छु । संसारभरीका जनताले मलाई यो त न्यायको पक्षमा रहेछ, शान्तिको पक्षमा रहेछ भनेर चिन्ने छन् । तर मलाई लाग्दैन तिनीहरूले लान्छन् र विश्वको हिरो बनाउँछन् ।’
प्रचण्डले असान्दर्भिक कार्यक्रममा हेगको कुरा किन बोले ? बुझ्न कठिन छैन । सत्तासमीकरण र पार्टी एकताको सन्तुलन मिलाउने नाममा बेलाबखत उनलाई हेगको त्रास देखाइँदैछ । कहिले तत्कालीन माओवादीका लडाकुको नाममा भ्रष्टाचारको मुद्दा त कहिले युद्ध अपराधमा हेग लगिने त्रास प्रचण्डलाई देखाइने गरेको कुरा चर्चामा आइरहन्छ ।
कसैलाई युद्ध अपराधमा हेग पुर्‍याउनुपूर्व सम्बन्धित देशले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधानलाई संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ । संयुक्त राष्ट्र संघको मध्यस्थतामा भएको नेपालको शान्ति प्रक्रिया र सोही शान्ति प्रक्रियाको आधारमा पूर्व विद्रोही नेता तीनपटक प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभालाई सम्बोधन गर्नेदेखि विभिन्न देशको भ्रमण गरेर उनीहरू अनुमोदित भइसकेको अवस्थामा प्रचण्डलाई हेग लैजान त्यति सजिलो चाहिँ छैन । शायद आफूलाई हेग पुर्‍याउने भनेर त्रर्साउनेहरूलाई प्रचण्डले जवाफ दिएका हुन् ।
हेगमा लगेमा आफू विश्वको हिरो बन्ने अभिव्यक्ति भने प्रचण्डको परस्परविरोधी अभिव्यक्ति हो । प्रचण्ड देशको हिरो नै बन्न सकेका छ्रैनन् । यथार्थ के हो भने प्रचण्ड देशभित्रै आलोच्य पात्र हुन्, उनको लोकप्रियता घटेको उदाहारण चुनावी नतिजाले देखाइसकेको छ । जे आश्वासन दिलाएर युवालाई सशस्त्र द्वन्द्वमा होमिन प्रेरित गरे, ती एजेण्डाबाट प्रचण्ड आफैँ पछि हटिसकेका छन् । प्रचण्डको जीवनस्तरमा सुधार आएपनि आम नेपाली जनताको जीवनस्तरमा तात्विक सुधार आएको छैन ।
विश्वको हिरो बन्छु भन्ने उनको आत्मरति मात्र हो, विश्वको हिरो बन्न लायक काम उनले गरेका छैनन् । विगतमा द्वन्द्वको नेतृत्व गरेकै आधारमा उनी हिरो बन्न सक्दैनन्, किनभने सशस्त्र युद्धमा सहभागी भएको ठूलो पंक्ति अहिले पश्चाताप गर्दैछ । फेरि उनलाई हेगमा लैजान तम्सिनेहरू माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वकै ‘बाइप्रडक्ट’हरू हुन् । अयोग्यको बिल्ला भिराएर रित्तोहात घर पठाइएका पूर्व लडाकुहरू नै प्रचण्डलाई हेग पुर्‍याउने षड्यन्त्रको हिंस्सा बनेका छन् । देशभित्रै आलोचनाको भूमरीमा रहेका नेताले विश्वको हिरो बन्छु भनेर आत्मप्रसंशा गर्नु प्रचण्डको दृष्टिदोष मात्र हो ।
सशस्त्र द्वन्द्वको नेतृत्वकर्ता र शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षरकर्ताको हैसियतमा आफ्नो टाउकोमाथि झुण्डिइरहेको ‘हेग तरवार’ हटाउने मुख्य जिम्मेवारी त प्रचण्डकै हो । नेपालको शान्ति प्रक्रिया मौलिक भएको र त्यसको हस्ताक्षरकर्तामध्ये आफू मात्र जीवित रहेको भनेर उनले श्रेय लिने गरेका छन् । शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने मध्येका एक पात्रको हैसियतमा प्रचण्डले यो प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन उनकै बढी योगदान अपेक्षित छ । लेलिन विष्ट या कुनै अदृष्य पात्रलाई आरोप लगाउँदैमा समस्याको समाधान हुँदैन ।
संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दालाई कार्पेटमुनिको धूलोजस्तै लुकाएर राख्दाको परिणाम नेताहरूले अहिले भोग्दैछन् । विदेश भ्रमणमा जान त्रर्सिनु पर्ने र सधैँभरी हेगको त्रासले उनीहरूलाई पच्छ्याइरहेको छ । विभिन्न देशका राजदूतहरूले अहिले पनि संक्रमणकालीन न्यायको कुरा उठाएर देशमा अस्थिरता उत्पन्न गर्ने काम गरिरहेका छन् । संक्रमणकालीन मुद्दालाई मेलमिलापका माध्यमबाट छिटो टुंग्याउनु नै सबैका लागि हितकर हुनेछ । दशकौं पुराना युद्ध अपराधको आरोपमा विभिन्न देशका नेताहरू बुढेसकालमा जेल परेका घटनालाई पूर्वमाओवादी नेताहरूले नजरअन्दाज नगरून् ।
राष्ट्रियताको पक्षमा अभूतपूर्व एकता : नेपालले शुरू ...
गढीमाई मेला भर्न आउन थाले भक्तजन
लेखा समिति सभापति भन्छन्– कांग्रेसले तोकेको भनेर बुटवलबाट राजधानी नसारियोस् !
बुटवलमा खुला ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता
पर्यटन वर्ष २०२० : २० लाख पर्यटक भित्र्याउनका आन्तरिक पर्यटन मेला फागुन ९ देखि